Sọftụwia - Akụrụngwa Akụkọ | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji nke 5)
Etu esi hazie taịlị Foto dị na Windows 8.1
Site na ntakịrị aghụghọ anyị ga-akọwapụta ihe anyị chọrọ ịhụ na taịl Foto na Windows 8.1.
Esi ewepu akara ngosi site na DLL na EXE faịlụ na Windows
Ọ bụrụ na akara ngosi nke faịlụ EXE ma ọ bụ DLL na-amasị gị, ịnwere ike wepu ya na Oyiyi site na Njikwa na Windows.
Otu esi emegharị pixel pointer pixel site pixel na Windows
Enwere ike ibudata pointer pixel site na pikselụ na obere aghụghọ na Windows ma ọ bụ jiri ngwa ndị ọzọ jiri keyboard.
Kporie Star Wars na windo ikuku Windows
Star Wars nwere ike ịnụ ụtọ ọnụọgụ iwu na Windows ma ọ bụrụ na anyị rụọ ọrụ Telnet.
Etu esi etinye vidiyo Youtube na PowerPoint 2010
Obere aghụghọ anyị nwere ohere ịtinye vidiyo YouTube n'ime ndebiri ngosi ngosi PowerPoint 2010.
Esi gbanwee mkpebi ihuenyo na Windows na ụzọ mkpirisi keyboard
Site n'iji obere ngwa ọrụ maka Windows ị ga-enwe ike ịgbanwe mkpebi ihuenyo site na itinye ụzọ mkpirisi keyboard.
Etu ịtọlite ​​ma rụọ ọrụ na OneNote Clipper
OneNote Clipper bụ ọrụ ga-enyere anyị aka ịdekọ ma chekwaa ọdịnaya weebụ maka nyocha ọzọ na akaụntụ akaụntụ Outlook.com anyị.
Etu esi akpọ oku HD na Skype site na ihe nchọgharị Internetntanetị
Anyị na-egosi gị usoro usoro ole na ole iji rụọ ọrụ Skype HD na ihe nchọgharị usingntanetị site na iji ngwa mgbakwunye sitere na Microsoft.
Etu esi eji EasyBCD mepụta bootable USB Windows installer
EasyBCD Ọ bụ obere ngwa ọrụ ga - enyere anyị aka ịmepụta eriri flash USB dị ka Windows installer n’ekwughi ịhazi ya.
Etu esi etinye akara mmiri na akwụkwọ Okwu
Ọ bụrụ n ’iji Microsoft Okwu 2010 gawa n’ihu, ị ga - ewebata onyonyo dị ka akara ngosi na dọkụmentị gị iji zere ohi ahịa.
Ngwa kachasị mma maka Chromecast
Chromecast bụ otu n'ime fashionable ngwaọrụ egwu multimedia ọdịnaya nke gị gam akporo ngwaọrụ na gị TV na ihuenyo.
Ngwa ngwa jikwaa vidiyo nke ụdị ọ bụla na iPad na Mac gị
Mụta otu esi ekiri ụdị vidiyo ọ bụla na iPad ọhụrụ gị yana otu esi lelee ha n'otu ụzọ na Mac gị
Otu esi egbochi ojiji nke ngwa na Windows na Mmemme Mmemme
Mmemme Mmemme bụ ngwa ọrụ ga - enyere anyị aka igbochi mmebi nke ngwa ọ bụla arụnyere na Windows.
Etu ibudata ma wụnye Office 2013 edenyere iwu
Ọ bụrụ na anyị nwere igodo ngwaahịa Office 2013, mgbe ahụ i nwere ụzọ anọ ọzọ pụrụ iche iji budata nrụnye na saịtị gọọmentị.
Wụnye ndọtị na Safari iji budata vidiyo YouTube
Mụta itinye mgbakwunye na ihe nchọgharị Safari iji budata vidiyo na YouTube na akpaghị aka
Otu esi amata ma ọ bụrụ na antivirus anyị na-arụ ọrụ nke ọma
Anyị na-ekwu ntakịrị aghụghọ iji mara ma ọ bụrụ na antivirus ịwụnye na Windows na-arụ ọrụ nke ọma.
Etu esi eziga ozi na faịlụ na Pushbullet site na Windows na ngwaọrụ mkpanaaka
Pushbullet bụ obere ngwa nwere ike inyere anyị aka izipu ozi ma ọ bụ faịlụ site na Windows gaa na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla.
Esi melite Vine na kọmputa nkeonwe
Obere aghụghọ anyị nwere ike hazi Vine iji mee ka ọ rụọ ọrụ na kọmputa nke anyị.
Otu esi lelee ozi ịntanetị ọhụrụ na-abanyeghị na Gmail
Ihe ngosi Gmail bu ihe nkwado ga - eme ka anyi mata mgbe email ohuru abiara n’enweghi ozi na igbe nnabata.
Etu esi edozi vidiyo n'efu na Youtube
YouTube awade ekwe omume dezie videos mfe si ya Portal na ikwu n'ụzọ, foto, odide, music na ọtụtụ ndị ọzọ.
Esi arụ ọrụ na Vine na kọmputa nkịtị
VineClient bụ ngwa mgbakwunye maka Google Chrome nke ga-enye anyị ohere ịrụ ọrụ na Vine si Twitter na kọmputa.
Etu esi wụnye font ederede ọ bụla na iOS na enweghị jailbreak
Ngwa inwe ike ịwụnye ụdị font ọ bụla na iOS na-enweghị jailbreak
Ihuenyo Task-enye gị ohere ịkọrọ gị na kọmputa na ihuenyo ọzọ n'ime otu obodo na netwọk
Task Screen bụ mmemme enwere ike iji kọọrọ ndị ọzọ nọ na netwọkụ kọmputa ahụ kọmputa.
Esi banye Xbox Live si Xbox One
Ozugbo Xbox One jikọtara, mụta otu esi abanye na Xbox Live
You ma ihe ndị ọzọ a ga - eji karịa Winamp?
WinAmp akwụsịla ịdị ma ya mere ọ dị mfe ịmalite ịnwe ụdị ngwa ndị ọzọ iji gee egwu.
Multiprotocol kachasị ngwa ngwa ozi ngwa ngwa maka Windows
Anyị na-egosi gị usoro nke ọtụtụ multiprotocol nzi ozi ngwa ngwa maka Windows.
Kedụ ka OneDrive ga-esi rụ ọrụ ma aha SkyDrive gbanwee?
OneDrive bụ aha ọhụrụ maka SkyDrive, nke nwere atụmatụ ọhụrụ ole na ole iji nyochaa dị ka Microsoft si dị.
Atọ iji kpochapụ oghere Windows Store na akụkọ ihe mere eme
Nchekwa dị na Storelọ Ahịa Windows nwere ike ịnwe akụkọ ihe mere eme nke ihe anyị zụtara na ndị ọzọ, ịnwepụ ozi a maka ebumnuche nzuzo.
Otu esi eme ka oku vidiyo na nzuzo na aha na Gruveo na Internetntanetị
Gruveo bụ ngwa weebụ nke ga - enyere anyị aka ịkpọ oku nke onwe na aha na - enweghị nọmba na adịgboroja.
Etu esi ekwu okwu na ozi olu na Facebook na Google Chrome
Ihe mgbakwunye maka Google Chrome nwere ike inyere anyị aka ịhapụ ihe ndekọ dị ka nkwupụta na ntinye Facebook.
Etu esi eziga ọdịnaya nke ederede ederede na nchekwa Windows
Clip bụ iwu nke anyị nwere ike iji wepụ ọdịnaya nke faịlụ ederede na nchekwa vidiyo nke Windows.
Windows 8.1 ga-akpaghị aka encrypt kọmputa gị ike draịva
Windows 8.1 na-atụpụta iji encrypt draịva siri ike nwa afọ ma ọ bụrụhaala na ị nweta nkwalite site na Windows 8.
NFO na DIZ faịlụ, kedu ihe ha bụ na otu esi agụ ha na Windows
Anyị ga-ekwupụta aghụghọ ole na ole iji nwee ike iji anya nke uche hụ faịlụ nke ụdị NFO na DIZ na Windows.
You maara na na Windows 8.1 ị nwere ike ịbupụta 3D ebipụta?
Windows 8.1 nwere atụmatụ ọhụrụ na n'etiti ha, ndị na-eji 3D Printing natively with its free tool.
Mechie kọmputa Windows 8.1 gị site na iji mkpọchi mkpọchi
Windows 8.1 nwere ike gbanyụọ ya na ntakịrị aghụghọ iji sistemụ mkpọchi sistemụ a.
You ma ihe MIcrosoft na-atụ aro yana Office ya maka ngwaọrụ mkpanaka?
A obere nyocha nke Microsoft na-enye anyị ụlọ ọrụ Office ya maka ụdị dị iche iche nke ngwaọrụ mkpanaaka.
Esi nwalee atụmatụ ọhụrụ nke KitKat Android 4.4 na Windows
KitKat Android 4.4 bụ nsụgharị kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google nke anyị nwere ike ugbu a iulateomi na Windows PC anyị.
Etu ị ga-esi nwetaghachi ekwentị ekwentị gam akporo gị
Ngwa abụọ nwere ike inyere anyị aka ịgbake furu efu ekwentị mkpanaaka gam akporo na usoro dị mfe yana obere mbọ.
Otu esi akwụsị efu na Recycle Bin na Windows
Methodszọ abụọ ị nwere ike iji hichapụ faịlụ na Windows na-enweghị Ihichapu Recycle Bin.
Etu esi enweta JellyReader RSS kacha mma
JellyReader bụ ọrụ weebụ ị nwere ike iji soro ozi RSS na-akwụghị ụgwọ ma jikọọ na Google Drive ma ọ bụ DropBox.
Nwee Windows XP, Windows 7 na Windows 8 na pendrive ekele WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB ga - enyere anyị aka ịnwe installers nke 3 nsụgharị nke Windows na USB pendrive.
WinShake, ihe enyemaka ima elu site na Start Screen na Windows 8 Desktop
WinShake na-enyere anyị aka ịdapụ ngwa ngwa site na Start Screen na Windows 8 Desktop.
Antivirus, kedụ n'ime ndị niile dị ugbu a kacha mma?
Anyị emeela obere nyocha nke iji ihe ziri ezi nke ekwesịrị iji antivirus dị iche iche dị na ahịa Windows.
Ihe 10 kachasị mma ị ga-enwe ekele na Windows 8.1
Windows 8.1 nwere ọtụtụ aghụghọ maka ndị ọrụ nke mbadamba na OS a, 10 n'ime ha bụ ihe kachasị mkpa dị ka Microsoft si dị.
Akụkụ ndị na-adọrọ mmasị ị kwesịrị ịma gbasara Windows 8.1
Enwere ike ịhazi Windows 8.1 iji mee ka ọrụ anyị na sistemụ arụmọrụ a ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma.
Otu esi enyocha kọmpụta anyị na Windows Offender offline
Anyi na-anọghị na Windows Defender bụ ụdị pụrụ iche Microsoft chọrọ ka ọ nwee ike iji mkpara USB ma ọ bụ CD-ROM ma ọ bụ diski DVD rụọ ọrụ.
Esi edozi okwuntughe siri ike
Eduzi ka ị nwee ike ịlele ma okwuntughe ị na-eji echekwa. Ọ bụrụ na ha abụghị, anyị ga-akụziri gị otu esi etinye paswọọdụ siri ike.
Ntuziaka nduzi maka iji Ihe
Muta otu esi eji igwe Kindle di uzo ma di mfe
Top 5 ngwa ọdịnala n'ihi na Musicians (Mac OS X)
Egwu dị mkpa taa ma ọ bụ ya mere m ga - eji gosi gị ihe m bụ 5 kachasị mma maka ngwa egwu maka dakọtara na OS X Mavericks
Tweetbits na-enye gị ohere ịhazi tweet gị na interface dị egwu
Mara Tweetbits ma hazie
Ihe 10 kacha mma foto maka iPhone nke 2013 dị ka Vinagre Asesino
Anyị na-ewetara ngwa iri kacha mma foto maka iPhone nke 2013 dị ka Vinagre Asesino
Esi gbanwee akara ngosi ọ bụla na Windows 8
Mụta otu ị ga-esi gbanwee akara ngosi ọ bụla na Windows 8
Ebe nrụọrụ weebụ 5 kacha mma iji budata ederede
Taa na Vinagre Asesino anyị na-ekwu maka weebụsaịtị 5 kachasị amasị anyị iji budata mkpụrụ edemede iji kwadebe ọrụ anyị
Gbanyụọ ma gbanye iPhone na bọtịnụ IKE mebiri emebi
Mụta otu esi agbanye iPhone gị ma gbanyụọ ya n’enweghị bọtịnụ IKE
Ngwa 7 iji mepụta ụdị weebụ
Tupu anyị echigharịkwuru onye mmebe weebụ iji mepụta mpempe akwụkwọ weebụ, anyị na-egosi gị 7 nhọrọ dị mma nke ga - enyere anyị aka ịmepụta ha n'echeghị onye ọ bụla.
Otu esi aga n'ihu ịwụnye Microsoft Office na Linux
Microsoft Office nwere ike ugbu a arụnyere na Linux na nkwado nke ụfọdụ ngwa.
Otu esi agba ngwa na Windows n’etinyeghi ya
Site na iji ngwa ọrụ abụọ na-atọ ụtọ, onye ọrụ nwere ike iji ha rụọ ọrụ iji tọghata ngwa ngwa na laptọọpụ Windows.
Themeefy na-enye gị ohere ịmepụta nkuzi n'ịntanetị ma kenye ọrụ
Themeefy bụ ngwa weebụ nke ga-eme ka anyị bụrụ ndị nkuzi ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ na klaasị arụmọrụ pụrụ iche.
Nhọrọ buut na Windows 8 nwere ike inyere anyị aka nke ukwuu mgbe a bịara n'ịgbake usoro nke anaghị amalite.
Enwere ọtụtụ ngwa dị mkpa maka gam akporo, mana taa anyị na-achịkọta gị na edemede 11 dị iche iche ka ị nwee ike ịchọpụta ọbụna ụfọdụ ọhụụ.
Anyị na-akuziri gị otu esi emepụta njikọ njikọta ọdịnala na ibe weebụ gị iji Windows 7 File Explorer mee ihe.
Etu esi etinye Recycle Bin na Windows 7 Taskbar
A nzọụkwụ-site-nzọụkwụ usoro pin ka egweri biini na Windows 7 Taskbar.
Otu esi eme ka nyocha ihuenyo na Windows 7 mgbe anyị na-apụ na kọmputa
Enwere ike iji ihe ngebichi iji gbochie Windows 7 na-akpaghị aka mgbe anyị anaghị eji kọmputa.
Otu esi emeziwanye ihe nchọgharị Internetntanetị
Nchọgharị Ntanetị na-echekwa ozi dị mkpa enwere ike ịdebe ma ọ bụrụ na anyị edozighị ya nke ọma.
10 Ngwa ị gaghị etinyezi na Windows 8
Windows 8.1 na-abịa na ọtụtụ atụmatụ ndị e wuru na obodo, na-enweghị ndị ọzọ achọrọ na nhapụ ọhụrụ a.
Otu esi eme ka onyonyo buru ibu ma dobe mkpebi ya na Adobe Photoshop
Adobe Photoshop na-enye anyị ohere ị ga-amụba onyonyo palọtụ nke ukwuu, na-echekwa ogo ya.
Chọọ web dị ka ọ dị na ngwaọrụ mkpanaka
Ihe nkwụnye nke nwere ike itinye na Google Chrome nwere ike inyere anyị aka ịhụ peeji ndị ahụ dịka na ekwentị mkpanaaka.
Etu esi merie Google na ajuju anyi
Google nwere usoro aghụghọ ole na ole iji jiri iwu akọwapụtara, ha niile na-enye nsonaazụ kwesịrị ntụkwasị obi ozugbo.
Naghachi-ehichapụ faịlụ na iCare Data Recovery
iCare Data Recovery bụ ngwa nke ga - enyere anyị aka ịgbake faịlụ nke anyị hichapụla mmadụ na mberede.
LastPass, ụzọ echedoro iji jikwaa okwuntughe anyị
LastPass bụ ngwa ọrụ dakọtara na sistemụ arụmọrụ dị iche iche na ihe nchọgharị usedntanetị ejiri jikwaa okwuntughe.
Etu esi ewepu Windows 8 Pro na Windows 7
DownGrade na Windows 7 enwere ike ịme naanị na Windows 8 Pro yana n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ Microsoft chọrọ.
10 Omume nchekwa dị irè iji tụlee na Windows
Anyị na-akwado gị ịgbaso 10 ndụmọdụ kachasị mkpa iji mee ka Windows rụọ ọrụ nke ọma.
Na-ege egwu dị n'okirikiri na Windows na Atmosphere Lite
Atmosphere Lite bụ ngwa ọrụ anyị nwere ike ịhazi ịge ntị n'ụdị okike na Windows dị ka ndabere.
Etu esi gbanyụọ ngwa ngwa na ihe oyiyi na Gmail
Obere aghụghọ anyị nwere ike ibute deactivating automatic loading of Images in Gmail.
Esi ewepu ihuenyo na Windows 8.1
Microsoft emeela ndozi maka oge iji nweta nseta ihuenyo na Windows 8.1.
Etu esi enweta ngwa Google Chrome m
Anyị na-ekwu banyere ndị ọzọ 3 ị nwere ike iji nweta desktọọpụ Chrome ma nyochaa ngwa ndị arụnyere.
Etu esi ejikwa nchekwa na Google Drive
Agbakwunyere ọrụ ọhụụ na nke na-atọ ụtọ na Google Drive ka ndị ọrụ ya nwee ike ijikwa faịlụ ha ngwa ngwa.
Wụnye Instagram na Windows ma ọ bụ Mac PC
Obere aghụghọ iji nwee ike ịdebanye aha ma wụnye Instagram na Windows na Mac.
Tọghaa kọmputa nkeonwe gị na ngwaọrụ gam akporo
Site na obere ngwa anyị nwere ike ịhazi sistemụ arụmọrụ gam akporo na Windows ma ọ bụ Mac.
Otu esi eji Picasa mee mkpokọta onyonyo dị mfe
Picasa Ọ bụ ngwá ọrụ nke nwere ike inyere anyị aka ịme ihe oyiyi nke ihe oyiyi kpamkpam n'efu yana obere usoro ole na ole.
Vuze Torrent Downloader: Download Torrent Files na gam akporo
Vuze Torrent Downloader nwere ike inyere anyị aka ibudata faịlụ Torrent na gam akporo site na iji Wi-Fi:
OnAir, ụzọ kachasị mma iji gee egwu na ekwentị dị iche iche
OnAir bụ ngwa ọrụ ga - enyere anyị aka ige ntị na egwu egwu na - ekesa site na kọmpụta anyị na ngwaọrụ dị iche iche.
Tweedle, onye ahịa Twitter maka gam akporo
Tweedle bụ onye ahịa Twitter maka gam akporo nke nwere ike inyere anyị aka ijikwa ihe karịrị otu akaụntụ site n'otu ebe.
Fọdụ uzo ozo na-ege ntị gụgharia music
Egwu gụgharia bụ otu ọrụ dị ugbu a taa, nke anyị ga-ekwupụta ole na ole ịhọrọ.
Kedu otu okwu YouTube si arụ ọrụ na Google+?
Ọ bụrụ na vidiyo YouTube nwere ihe ekwesịrị igbochi, ị nwere ike ịme otu site na akaụntụ Google gị.
Uzo mkpirisi kiiboodu na Windows 8.1 iji mee ngwa gi
Obere aghụghọ anyị nwere ike ịmepụta ụzọ mkpirisi keyboard iji rụọ ọrụ ọ bụla na Windows 8.1.
5 ezigbo uzo ozo iji chekwaa gam akporo na okwuntughe
Izute ole na ole gam akporo ngwa na ị nwere ike ibudata site na Google Play iji chebe gị gam akporo ngwaọrụ na ike okwuntughe.
Ngwa Ex-Metro kachasị mma maka Windows 8.1
Anyị na-akpọ gị òkù ka ị zute ngwa ole na ole ọ na-echekwa na ụdị Metro nke Microsoft chọrọ maka Windows 8.1
Etu esi ebudata vidiyo Instagram
Enwere ike ibudata vidiyo nke 15-nke Instagram na mpụga ma ọ bụ ngwa weebụ.
You maraworị otu ị ga-esi egwu Enyi A Na-ahụ Anya?
Enyi A Na-ahụ Anya ma ọ bụ Enyi Nzuzo bụ otu n’ime egwuregwu kachasị atọ ụtọ maka ụbọchị ndị a. Anyị na-egosi gị ụzọ isii ọzọ ị ga - eji kpọọ ndị enyi gị.
Etu esi mepụta Google Street View
Ugbu a, anyị nwere ike iji onyonyo nke anyị hiwere na Google+ ka ha wee bụrụ akụkụ nke aha Google Street View.
Kwụsị ugbu a maka gam akporo mobile ngwaọrụ
Quip bụ ngwa gam akporo enwere ike iji dị ka ederede ederede nchịkọta akụkọ.
SmallPDF na ọrụ ya anọ iji rụọ ọrụ na ntanetị yana PDFs
SmallPDF nwere ike inyere anyị aka iji PDF rụọ ọrụ site na iji naanị ihe nchọgharị internetntanetị anyị.
8 weebụsaịtị kacha mma iji budata akwụkwọ ahụ aja
E nwere ọtụtụ nde akwụkwọ ahụaja anyị nwere ike ibudata na Internetntanetị. Anyị na-enye gị ebe nrụọrụ weebụ asatọ kachasị mma iji budata ego.
Tọghata faịlụ RAR gị na onyogho ISO n'ụzọ dị mfe na AnyToIso
AnyToIso bụ obere ngwa ọrụ ga - enyere anyị aka ịgbanwe faịlụ, folda, akwụkwọ ndekọ aha, diski DVD na ọtụtụ ihe na onyoyo ISO.
Esi egbochi Apple mobile ngwaọrụ iji nyefee ụmụaka aka
Abụọ dị mfe ụzọ igbachi Apple Devices ka obi ike nyefee ụmụaka.
Dekọọ ma dezie ihe kacha mkpa na Kalinda Outlook.com
Kalenda Outlook bụ ngwa ọrụ magburu onwe ya nke ga - enyere anyị aka icheta ihe omume ndị dị mkpa ma mepụta ole na ole dịka mmasị anyị si dị.
Buut ma ọ bụ buut?, Ime Anwansi ISO Maker ga-achọpụta
Ime Anwansi ISO nke nwere ike inyere anyị aka (ụfọdụ ihe) ịchọpụta ma onyonyo ISO bu Bootable ma ọ bụ.
Were aka gi gbanwee ubochi nke onyogho anyi na foto anyi
Picasa na exiftool bụ ụzọ abụọ kachasị mma anyị nwere ike iji gbanwee ụbọchị nke foto anyị.
Nyochaa onyonyo diski na MobaLiveCD
MobaLiveCD nwere ike inyere anyị aka ịchọpụta ma onyonyo ISO nwere bootable buut ma ọ bụ na ọ bụghị.
Jikwaa okwuntughe anyị niile na F-Secure KEY Password Manager
F-Secure KEY Password Manager bụ obere ngwa nwere ike inyere anyị aka ijikwa nzere nnweta niile n’otu ebe.
Gịnị bụ VHD mebere disk image?
Iji Windows 7 Recovery Disc, anyị nwere ike ịghachite OS kwadoro na onyonyo VHD.
Jikwaa otutu ọrụ igwe ojii na Multcloud
Multcloud bụ ọrụ na - akwụghị ụgwọ nke nwere ike inyere anyị aka ijikwa ohere nchekwa dị iche iche na igwe ojii site n'otu ebe.
XBox Live na weebụ? Yabụ ka anyị bụrụ akụkụ ya na Windows 8
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Microsoft tụrụ ụtụ (dị ka Hotmail.com) mgbe ahụ ịnwere ike ịnụ ụtọ XBox Live na webụ.
"Ekpebiela m imechi akaụntụ Hotmail m kpamkpam"
Mụta ụzọ ziri ezi iji mechie akaụntụ Hotmail nke ọma site na ịhọrọ nke ọ bụla n'ime ụzọ abụọ dị adị maka ọrụ a.
Nchịkọta nke ndị editọ ederede ederede pere mpe
Ọ bụ ụlọ nke otu n'ime ndị editọ ederede kachasị adọrọ mmasị na weebụ, na-enye ọrụ ọrụ dị mkpa ma dị mkpa.
Volafile.io na-ekekọrịta faịlụ na ndị ọrụ ndị ọzọ na-enweghị aha
Volafile.lo bụ ọrụ igwe ojii nke ga-enye anyị ohere ịkekọrịta faịlụ na ụlọ ma ọ bụ otu dị iche iche na-enweghị aha.
Penflip, onye nchịkọta akụkọ nchịkọta ederede dị mfe
Penflip bụ obere ederede ederede na-arụ ọrụ na igwe ojii nke nwere ike ịkpọkwuo ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ otu ọrụ.
Gbanyụọ ọrụ Windows 8 Windows Store
Storelọ Ahịa Windows bụ ngwa nke gosipụtara na taịlị na Windows 8 Start Screen, enwere ike weghachite nwa oge.
MyMail, onye ahia email magburu onwe ya maka gam akporo na iOS
myMail bụ obere ngwá ọrụ nke na-eme dị ka onye ahịa maka ozi ịntanetị anyị, mana ọ dabara na ngwaọrụ gam akporo na iOS.
MediaFire Desktop, ụzọ dị mfe iji 10 GB n’ígwé ojii
MediaFire Desktop bụ onye ahịa nke ọrụ nnabata na igwe ojii anyị nwere ike iji na Windows nwere oghere 10 GB n'efu.
Ndị egwu egwu kachasị mma maka gam akporo
Ndepụta nke ndị egwu egwu kacha mma bụ: PowerAMP, doubleTwist, N7 Player, Neutron Music Player na VLC. Ise zuru oke nhọrọ maka ndị hụrụ egwu n'anya
Etu ị ga - esi gbanyụọ ngwa na - amalite na Windows
MSConfig bụ iwu Windows nwere ike iji gbanyụọ ụfọdụ ngwa na-amalite na OS ma melite arụmọrụ ha.
Nchịkọta nke 10 kacha mma Launchers maka gam akporo
Anyị ga-ekwupụta Launchers 10 kachasị mma maka gam akporo, jiri obere mkparịta ụka banyere njirimara kachasị mkpa nke ha.
Learningmụta jikwaa faịlụ anyị na Windows Live Photo Gallery
Windows Live Photo Gallery Ọ bụ obere ngwa ọrụ ga-enyere anyị aka ịkekọrịta onyonyo na vidiyo na netwọkụ mmekọrịta na ọrụ ndị ọzọ.
Iji ọrụ ndị kachasị mkpa na YouTube
YouTube nwere Transcription dị ka otu ọrụ na-atọ ụtọ ga-enye anyị ka anyị ghọta vidiyo ka mma mgbe ọ na-egwu egwu.
Nweta ọtụtụ ndị na-agbanwe ego maka ngwaọrụ dị iche iche
Ihe ntụgharị ego na-adọrọ mmasị ị nwere ike iji na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ na kọmputa site na ngwa weebụ.
Zọ dị mfe iji mepụta diski mebere na Windows
Dataram RAMDisk bụ obere ngwaọrụ nke ga - enyere anyị aka ịmepụta diski mebere dabere na iji nchekwa RAM sistemụ ahụ.
Pịa ugboro abụọ ka ị kpọghee Mac na ịkụ aka
Kụrụ aka bụ obere ngwá ọrụ na-enyere aka unlock kpọghee ekwt Mac site ugboro abụọ na ịme ọpịpị na iPhone ihuenyo.
Onwere onye nwere ike soro ozi email anyi?
Site na aghụghọ ole na ole, anyị ga-enwe ike ịchọpụta ma ozi ịntanetị anyị na-enye nzuzo nke ozi n'oge ezigara anyị.
Aghụghọ ịmata onye banyere na akaụntụ email m
Otu n’ime ajụjụ kachasị iche na ntanetị bụ: Akaụntụ email; eji aghugho n’enweghi ike igwa mmadu n’eme ya.
Etu esi melite ozi dị na Gmail Ndi ana-akpo gi na akpaghị aka
Site na iji igwe Google, anyị nwere ike imelite ozi kọntaktị anyị chọrọ na akpaghị aka.
Jiri okwu okwu dee okwu na-ederede
talktyper bụ ngwa weebụ nke na - eme ka igwe okwu nke kọmputa anyị rụọ ọrụ ka anyị wee nwee ike ịmalite ịkọwa ma gbanwee ihe niile ka ọ bụrụ ederede.
Ọrụ MEGA Bochum, gịnị kpatara iji ya na ndị ọzọ?
MEGA na-enye gị ohere ịnweta 50 GB nke ohere na igwe ojii kpamkpam na igwe ojii maka ekwentị mkpanaaka na kọmputa nkeonwe.
Na-achọ ụzọ kachasị mma iji kpochapụ ngwa na gam akporo
Lee ụzọ abụọ dị mfe ịgbaso iji wepu ngwa na ngwa gam akporo gị.
Etu esi gbanyụọ Windows Live Mail na Firefox
Windows Live Mail bụ ọrụ ndabara dị na Mozilla Firefox mgbe ị na-ezipụ ihe oyiyi site na ihe nchọgharị ahụ site na e-mail.
Kedu ihe kpatara anyị ga - eji zoo ozi na USB pendrive
BitLocker bụ ngwa ejikọtara na Windows 7 na Windows 8 nke ga - enyere anyị aka igbochi nnweta na pendrive USB na paswọọdụ.
Locchọta ebe ma wepu okwuntughe na Firefox
Obere aghụghọ ị nwere ike họrọ iji hichapụ ma ọ bụ okwuntughe niile akwadoro na Firefox.
Nseta ihuenyo na ShareX na igwe ojii na kọmputa
ShareX bụ obere ngwa mepere emepe na-enye anyị ohere iwere screenshots n'ụzọ dịgasị iche iche na iche iche.
Simplezọ dị mfe iji mepụta ndepụta RSS RSS
Ohere ịmepụta RSS RSS nke Twitter anyị mere ka o kwe omume site na edemede Google nyere.
Olee otú gbanwee ụfọdụ jụụ akụkụ nke OS X n'ọdụ ụgbọ mmiri? (II)
Na nke abụọ a, anyị na-enyocha akụkụ ndị ọzọ anyị nwere ike gbanwee na ọdụ ụgbọ mmiri nke Mac anyị na sistemụ arụmọrụ: OS X Mavericks
Nyochaa: Etu esi ebudata ihe oyiyi na nbudata onyonyo dị mfe
Ihe onyonyo onyonyo bụ obere ihe ntanetị nke Google Chrome nke ga - enyere anyị aka ibudata ihe oyiyi nke ihe oyiyi akwadoro na weebụsaịtị.
OSX Mavericks agaghị ekwe ka ị wụnye ụfọdụ ngwa na Mac gị, mụta otu esi eme ya
Anyị na-akụziri gị jikwaa nhọrọ nchekwa nke OSX Mavericks nwere iji wụnye ngwa ndị ọzọ na mpụga Mac App Store
Review: Atọ soro anyị zitere ozi ma mara ma ọ bụrụ na ha na-agụ
Ọrụ abụọ na-adọrọ mmasị na weebụ na-enyere anyị aka ịmata ma agụọla ozi ịntanetị anyị ma ọ bụ na ọ bụghị site na nyochaa ọrụ ha.
Mụta maka na optimally hazie Njikwa Mission na OSX Mavericks
Anyị na-agwa gị ihe Njikwa Mission dị na Mac yana otu esi ahazi ya nke ọma
Dezie faịlụ Excel, Okwu na Powerpoint na ngwa HOPTO maka iPad
Hopto, ngwa ọhụrụ iji dezie faịlụ Office na iPad
Nyochaa: Ndị ọzọ na nkwado ndabere na Windows
Iji weghachite usoro anyị niile na ngwa nke anyị etinyela na Windows, anyị na-atụ aro akwụkwọ ntuziaka iji soro dị mfe.
Otu esi agba ọsọ kọmputa
Iji mee ka ọrụ nke kọmputa anyị dị ngwa, anyị ga-agbaso usoro ndị a. Kọmputa ahụ ga-arụ ọrụ ọzọ dịka ụbọchị mbụ.
Wụnye AppLock na gam akporo gị ma nye nchebe na ngwa gị
Anyị na-akọwa usoro ị ga - agbaso iji tinye koodu nchekwa na ngwa ịchọrọ site na AppLock
Emepụtara gam akporo 4.4 maka Nexus 7
A tọhapụrụ 4.4 gam akporo maka 7 Nexus 2013
Review: Olee ịgbawa okwuntughe na Firefox na Google Chrome
Nyochaa otu esi achọpụta okwuntughe echekwara na Firefox na Chrome site na nzọụkwụ na-enweghị ngwa ndị ọzọ.
Windows 8 akaụntụ na njikwa dị ntakịrị na usoro ole na ole
Anyị na-akụziri gị nkuzi a iji mepụta akaụntụ na Windows 8 na njikwa pere mpe
Aghụghọ 11 iji nwetakwuo ndị na-eso ụzọ na Instagram
Usoro aghụghọ ole na ole maka ndị bidoro na Instagram, iwu niile iji zere ntaramahụhụ.
Nhọrọ nke Onwe: Egwuregwu 5 kachasị amasị m maka iOS
N'isiokwu a, achọrọ m igosi gị nke bụ egwuregwu 5 kachasị amasị m maka iOS site na iji Storelọ Ahịa App maka nbudata na-esote.
Kedu otu vidiyo vidiyo YouTube na-arụ ọrụ ga-esi arụ ọrụ?
Youtube ka gosipụtara na a ga-arụ ọrụ iji lelee vidiyo na ekwentị mkpanaaka na-enweghị njikọ ịntanetị na Nọvemba.
Tim Cook na-agba ndị ọrụ ya ume site na email
Ndị ọrụ Apple niile natara ozi email sitere n'aka Tim Cook na-agba ha ume ka ha rụọ ọrụ ha na mmụba ezumike
Zọpụta ma kekọrịta ederede nke egwu gị niile na musiXmatch
Ọ bụrụ na karaoke bụ ihe gị ma ọ bụ na ịchọrọ ịma ihe ọkacha mmasị gị na-abụ abụ, musiXmatch ga-enyere gị aka ịchọpụta egwu nke egwu gị.
Ise egwuregwu kacha mma maka desktọpụ gị
Anyị na-ewetara gị egwu egwu egwu ise maka PC ma ọ bụ Mac, siri ike ịhọrọ nke kachasị mma, mana nhọrọ ise dị oke mkpa maka ndị hụrụ egwu.
The kacha mma atụmatụ nke iOS 7 n'ụzọ zuru ezu (II)
Na nke a, anyị nyochaa atụmatụ 4 dị iche iche: Siri, Foto, Safari na AirDrop.
Kedu ụdị ngwa ọrụ ngwa ngwa Evernote na-enye?
Site na akwukwo nri, memos, atumatu njem, onu ahia, nkpuru onyonyo bu ufodu ojiji anyi ga akuziri gi banyere Evernote.
Tutorial: Mekọrịta na iTunes na-enweghị adịkwa gị data
Anyị na-egosi gị usoro otu esi emekọrịta iDevice gị na nke mbụ ya na iTunes na PC gị ma ọ bụ Mac ka ị ghara ida data
Ise dị mkpa ngwa na-agba ọsọ na gam akporo
Ngwa ndị na-agba ọsọ nke gam akporo nwere bụ enyi zuru oke iji dekọọ ụzọ, ọnụ ọgụgụ na ịkekọrịta ihe niile na Facebook na Twitter.
Etu esi ekpochapụ Google History
Ikpochapụ akụkọ Google gị dị mfe. Nke a bụ usoro ntuziaka site na nkwụsị ka ị wee nwee ike ikpochapụ akụkọ ntolite Google gị. Kọwaa ihe ọchụchọ ndị na-enweghị nsogbu
ASO Ntuziaka: Nhazi ngwa na ngwa ngwa
ASO (App Store Optimization) dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na enweghị ya anyị agaghị etinye ngwa anyị n'ụzọ ziri ezi na ụlọ ahịa ngwa ahụ.
Auto Refresh Plus, mmelite peeji nke na-akpaghị aka
Auto Refresh Plus na-enye ndị ọrụ Chrome ohere imelite otu ma ọ bụ ibe weebụ dị iche iche na-akpaghị aka site na etiti oge.
Ngwa kacha mma kachasị mma, ihe ndị ọzọ na iMessage, maka ndị ọrụ iOS
BackBerry Messenger (BBM) bụ otu n’ime isi ihe mere ndị mmadụ ji ejigide ngwaọrụ ...
Mara mma CUT - Ike nke ukwuu free video vidiyo na vidiyo na kalenda Multi-Layer
Mara mma CUT bụ ngwa zuru ụwa ọnụ (raara nye iPhone na iPad) ma jupụta na ngwa ọrụ dị egwu sitere na ...
RockPlayer2 biara na njiri mara njiri mara ya yana iji kesaa WiFi otutu ma lelee vidio di na ntaneti
Ọ dịla anya a kemgbe RockPlayer2 e mere ka iOS ọrụ, na ugbu a bụ oge maka…
Uzo mkpirisi Firefox maka ime nchọgharị ọsọ ọsọ
Chrome na Firefox - abụọ n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu - nwere ụzọ mkpirisi keyboard yiri nke a, mana ee ...
Bụkuo! Bụkuo! Maka iPhone: soro onye ọ bụla nọ n'ụwa na-abụ abụ karaoke
Bụkuo! bụ ngwa na-enye gị ohere ịme nsụgharị karaoke nke egwu ịchọrọ, mana ọ kwụsịghị ebe ahụ. Enwere…
Kedu akụkụ mejupụtara keyboard?
Igodo bụ ngwa ntinye ederede nke na-eji nhazi nke igodo, ka ha wee rụọ ọrụ dịka ...
Rom ringkekọrịta - Omuma console online emulators
Rom ringkekọrịta bụ free ngwa na-enye anyị 6 dị iche iche online emulators nke kpochapụwo consoles na ha na nwoke egwuregwu n'ihi na onye ọ bụla.
Kedu ihe bụ ip m?. Etu esi amata IP nke ị na-ejikọ na Internetntanetị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara otu ị ga - esi hụ IP gị na ihe ọ bụ maka ya, gaa n'ihu na - agụ obere nkuzi a gbasara adreesị IP gị. Chọpụta ihe IP gị dị na ihe na-erughị otu nkeji.
Soro 2012 London Olympics na NBC Olympics na NBC Olympics Live Extra [Android, iOS]
Inwe gam akporo ma ọ bụ iPhone nwere ike ịga ogologo oge iji mejuo agụụ gị maka ihe ọmụma egwuregwu. Na…
Gini mere Airdroid agaghị ejikọ?
Airdroid bụ ngwa ga-enye anyị ohere ijikọ ngwaọrụ ọ bụla onye ji ngwa ngwa gam akporo na kọmputa anyị.
Bu Tab, iulateomi Internet Explorer na Google Chrome
Bu Tab-enye anyị ohere iji zuru okè i engineomi Internet Explorer nsụgharị engine n'ime Google Chrome interface.
Otu n'ime ụzọ kachasịsị iji ziga faịlụ ma ọ bụ ederede karịrị email ma ọ bụ ndị ozi ozugbo instant.
Mgbe ekwu okwu banyere ụfọdụ ndị kasị mma-ọgaranya na ọtụtụ-eji, desktọọpụ ọdịyo Player, jetAudio,…
Ntugharị Tab ọhụrụ, họrọ peeji nke maka taabụ ọhụrụ
Ntụziaka dị mfe iji setịpụ peeji nke ndabara Google mgbe ị na-emepe taabụ ọhụrụ na Google Chrome.
Otu esi eme mkpirisi na ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị gị
Nkuzi di mfe na onyonyo n’etu esi mepụta ụzọ mkpirisi dị ka ngwa na weebụsaịtị kachasị amasị gị.
Were nseta ihuenyo na Preview maka Mac na usoro aghụghọ ndị ọzọ [Tip]
N'elu ya, onye na-ekiri ihe oyiyi ndabara nke Mac dị ka mediocre. Chọpụta, ọ na-ahapụ gị hụ ...
The iTunes App Store jupụtara foto na vidiyo ngwa, na bụla ugbu a na mgbe, anyị na-ahụ…
Ọ dị ọhụrụ na ụlọ ahịa Google Play na iOS App Store, Masatu bụ netwọkụ ọhụụ na-atọ ụtọ ...
Ngwa kachasị mma ịkpọte gị n'ụtụtụ.
IllegalAlienReport.com: Otu saịtị iji chọpụta ma kọọ iwu na-akwadoghị na United States
Ebe ohuru ejiriwo anyi mee ihe. Nke a bụ IllegalAlienReport.com, weebụsaịtị wepụtara iji chọpụta ma kọọ iwu na-akwadoghị ...
Mmemme P2P kacha mma maka gam akporo
Taa, netwọk P2P maka gam akporo dị ka ụzọ dị mma iji zipu faịlụ n'ogologo.
FileFort ndabere, mepụta nkwado nke akwụkwọ niile, foto na folda egwu na sava FTP
FileFort ndabere bụ ihe dị mfe, ma dị ike data ndabere ịba uru na-akpaghị aka na-enyere nkwado ndabere na mpaghara ...
Windows Live Solution Center: Idozi nsogbu na Microsoft
Maka ndị na-achọ ọrụ ọrụ aka ka ha nwee ike idozi nsogbu ha metụtara ngwaahịa Microsoft, ọkachasị maka ...
Iorad - Mepụta akwụkwọ ntuziaka maka mmekọrịta
iorad bụ ngwa weebụ nke na-enye anyị ohere ịmepụta akwụkwọ ntuziaka mmekọrịta ngwa ngwa na ngwa ngwa
Kedu ihe bụ igbe mkparịta ụka na gịnị ka ha bụ?
A maara ya dị ka igbe mkparịta ụka na windo windo ndị ahụ na-apụta n'etiti ihe anyị na-ejikarị eme ihe na ...
Etu esi jikọọ nyocha ahụ na CPU?
Igwe nyocha ma ọ bụ ihuenyo bụ ngwaọrụ ngosi nke na-adịkarị obere TFT-LCD ihuenyo, nke ...
PDF Sb - Nchọgharị ntanetị maka akwụkwọ na PDF
pdf sb bụ ngwa weebụ na-akwụghị ụgwọ nke na-enye anyị ezigbo nchọta ihe nchọgharị maka pdf faịlụ nwere ihe karịrị nde akwụkwọ elektrọnik 7 na ọdụ data ya.
Gịnị bụ SWF faịlụ?
Faịlụ onye ngwụcha ya bụ SWF bụ faịlụ ndị ahụ nke usoro ntanetị, nke eserese vector, na nke ActionScript, nke…
Mepụta Animated Ntinye aka
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmepụta ọrụ ndezi kọmputa maka foto gị ma ọ bụ ọdịnaya weebụ, emela ...
Kedu faịlụ ndị na-adịru nwa oge na gịnị ka ha bụ?
Otu n'ime ọrụ kachasị mma nke sistemụ nrụọrụ nwere bụ ịmepụta faịlụ ndị ama ama, ihe ...
Mmemme iji mee ihe atọ
Nkpirisi nke ị maara nke ọma bụ ụdị broshuọ ozi a na-apịaji n'akụkụ atọ, ebe ...
Mgbanwe nke email
Emepụtara ozi ịntanetị na izizi na 1965 ma bia ogologo ụzọ kemgbe ...
Okwu akara - Lelee ederede ederede ederede dị iche n’otu oge
wordmark bụ ezigbo ngwa na-enye anyị ohere ile ederede dị iche iche n’otu akụkụ iji kpebie mkpụrụ edemede kacha mma.
Chepụta akwa agbamakwụkwọ gị n'ịntanetị na Uwe Agbamakwụkwọ
agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ bụ ngwa na-enye gị ohere ịmepụta uwe agbamakwụkwọ gị na ịntanetị n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa
Budata ụdị Google Chrome dị iche iche
Fewbọchị ole na ole gara aga Google Chrome nwetara nsụgharị ọhụrụ, nọmba 9, nke bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ...
Tụgharịa foto gị ka ọ bụrụ Zombies na Zombifier
zombifier bụ ngwa nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ihu anyị n'ime foto n'ime zombies na -emepụta photomontage nwere ezigbo mmetụta
Tụgharịa asụsụ ọdịyo ọ bụla ka ọ bụrụ ederede na VoiceBase
Voicebase bụ ngwa na-enye anyị ohere ịgbanwe faịlụ ọdịyo na ederede dị mfe na n'efu, ọ na-enyekwa anyị ohere ịme ntụgharị.
Obere akụkọ banyere Mac OS sistemụ
Nke a na oge anyị na-aga ịrara onwe anyị na-ekwu okwu banyere akụkọ ihe mere eme nke Mac OS sistemụ. Versiondị nke mbụ ...
Esi edozi PC igodo anaghị arụ ọrụ
Ọtụtụ oge anyị na-apịnye ihe na kọmputa ma ọ bụ na-ekwu okwu na MSN, anyị ghọtara na enwere ...
How to say "M hụrụ gị n'anya" na mgbakọ na mwepụ
N'ezie, echiche dị n'igbe akpọrọ Nerd Love Solve for "i" bụ ihe na-achọsi ike ịsị "Ahụrụ m gị n'anya" ...
Hazie Firefox na Rotator Personas
Ederede a maka nhazi ihe nchọgharị site na-agbanwe ndebiri na-arụ ọrụ dị ka akpịrị akpụkpọ, na-agbanwegharị oge n'etiti ...
Ebee ka m ga-ahụ folda akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya
Na-agbagharị n'ụgbụ, kwa ụbọchị, anyị na-ahụ ihe oyiyi na ụdị ozi dị iche iche anyị hụrụ mara mma, na-akpa ọchị ...
Lelee hotmail m
O doro anya na Hotmail bụ otu n'ime ọrụ email a na-ejikarị, nke a bụ n'ihi ọmarịcha ya ...
Sistemụ arụmọrụ gam akporo
Otu n'ime sistemu eji arụ ọrụ ebe niile taa bụ gam akporo, nke Google zụtara na 2007 ma nwee atụmatụ na-adọrọ mmasị.
Firebug maka Chrome
Firebug bụ otu ihe kpatara na ụfọdụ ndị mmepe web agbanyebeghị na Firefox maka Chrome. Ihe…
Multimedia ike mbanye
Dika anyi matara, na nso nso a, teknụzụ enweela ọganihu site na mmali na mpaghara nke ntụrụndụ ụlọ na ...
Mgbatị iji budata vidiyo YouTube na Google Chrome
N'ime ndọtị nke ọrụ Google maka Chrome nke anyị na-ekpughere, nke kachasị mkpa maka ...
Detuo taabụ na ụzọ mkpirisi igodo
Iji mepụta taabụ anyị na-ejikarị pịa taabụ ahụ ma gaa na nhọrọ oyiri. Ma ọ bụrụ na ị bụ ...
Uzo mkpirisi keyboard Google Chrome
Mgbe ịmalite iji mkpirisi keyboard na mmemme ọ bụla, ị ghọtara oge enwere ike iru ...
Wụnye Google Chrome na-anọghị n'ịntanetị
Ejiri njikọ iji wụnye ihe nchọgharị ahụ na ibe Google Chrome. Nanị ụzọ dị mma bụ ...
Nkọwa nke ịntanetị
Ntanetị agbanweela ụzọ nke ịgwa ụwa niile okwu, ozi niile nke nwere ike isi ike na mbụ ...
Intaneti na XNUMXst narị afọ
Internetntanetị, dị ka anyị maara nke ọma, bụ ụzọ ọrụ maka ọtụtụ mmadụ, ebe ọ na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ịbụ ...
Mmemme kacha mma iji mee graffiti
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke usoro ọhụụ na ị hụrụ n'anya ịnọ n'azụ mgbidi na-ekpori ndụ ma na-atọ ụtọ ...
Mara Google interface interface (II)
Site na Chrome ị nwere ike ịnweta ntinye na desktọọpụ, nke ị nwere ike ịmalite ngwa weebụ ozugbo na ...
Atụmatụ na uru nke Google Chrome
Otu ụlọ ọrụ web na mba dị iche iche a ma ama, Google malitere na 2008 dịka ị maara nke ọma, ihe nchọgharị Internetntanetị ya, ọkaibe, ...
Norton Antivirus Njirimara
You na-achọ ezigbo antivirus na-echekwa kọmputa gị oge elekere 24 kwa ụbọchị? Ọ bụ eziokwu na onyinye ...
Uru na ọghọm nke email
Anyị maara nke ọma na email bụ otu n'ime ihe ndị kachasị agbanwe n'oge na-adịbeghị anya nakwa na ọ nwere ...
Anyị na-aga n'ihu ịmụtakwu banyere akụkụ gbara ọchịchịrị nke Mgbakọ. Anyị pụtara crackers. Otu n'ime ụdị nke ...
Firedị Firewalls: Uru na ọghọm ya
Anyị amaworị maka firewalls network ma ọ bụ nzacha ngwugwu, ọ bụ oge iji mara nke ọzọ nke ...
Etu esi ewepu taabụ ibe edokọbara ọhụrụ na Ogwe Google
Ogwe Google ọhụrụ tinye na ndabara arụmọrụ ọhụrụ nke nwere ike ọ gaghị amasị onye ọ bụla ...
Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-aga YouTube ma ịchọrọ ịchọọ vidiyo, ọtụtụ nsonaazụ na-apụta ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ...
Wụnye Adobe Flash Player kachasị ọhụrụ na Google Chrome
Ndị ọrụ Google Chrome achọpụtala na mgbe ụfọdụ, anyị enweghị ike ịkpọ vidiyo YouTube na mgbe ...
Gini bu blog?
Gịnị bụ blog?. Blọọgụ ọ dị ka ọgbakọ ka ọ bụ Portal? N'ebe a, ị ga-ahụ ọdịiche dị n'etiti ihe blọọgụ na ihe na-abụghị blọọgụ, akọwapụtara n'ụzọ nnabata na ihe atụ.
Mepụta akaụntụ Gmail
Nkuzi na ntuzi aka iji mepụta akaụntụ na Gmail, ozi Google ga - akwụ gị ụgwọ maka ọrụ ndị ọzọ dịka YouTube, Google Play na ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ ndị njikwa
Kedu ihe bụ ọkwọ ụgbọala? Ebe ị ga-ahụ ihe mkpa ka ị mara banyere ọkwọ ụgbọala (ma ọ bụ controllers) kọwara mfe na ihe oyiyi.
Akụkụ nke atọ nke trilogy banyere ihe egwu dị na ịntanetị. N'okwu a, gbasara Cyberterrorists na ụzọ ha si eji.
Akwụkwọ Ares. Ntinye na nhazi nke Ares 2.0.9
Ares Manual na Spanish. Na ntuziaka a nke mbipute 2.0.9 nke Ares oge niile anyị ga-ahụ otu esi etinye ma hazie usoro ihe omume iji budata ngwa ngwa na Spanish na ọtụtụ onyonyo.
Jide ihe ị na-ekwu ka ọ dịkwuo mma
Ndụmọdụ maka ikwu iji nyere ọnọdụ aka ma ọ bụghị nke ọzọ. Ihe ị kwesịrị ime na ndị ị na-ekwesịghị ime. Ogologo ogologo, trolls, usoro ọchụchọ, wdg.
Nkwupụta na nhazi usoro.
Nkwupụta bụ ihe dị mkpa iji mee ka blọọgụ nwee mmekọrịta, mana mgbe ị na-etinye ọkwa ị ga-etinye ha na usoro nhazi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọrụ niile ị na-arụ na peeji gị rụọ ọrụ nke ọma na njikwa ọchụchọ.
AdSense na ojiji. AdSense Paradox
Esemokwu AdSense megidere ojiji. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji Adsense kpata ego, ị ga - ebu ụzọ nweta ezigbo okporo ụzọ na blọọgụ gị. Ọ bụrụ n ’ị ga - ebuli mgbasa ozi gị karịa oge ole ị bịara, ị gaghị enwe ike itolite.
PPS. Gịnị bụ ppsx faịlụ na otu esi elele faịlụ na ndọtị .ppsx
PPS. Faịlụ nwere ndọtị .pps / .ppsx bụ ihe ngosi enyere na Microsoft PowerPoint. A na-akpọ ụdị faịlụ a pps / ppsx
Esi tinye akara mmiri na ihe oyiyi anyị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma otu esi etinye akara mmiri na onyonyo gị, ị kwesịrị ịgụ usoro nkuzi a nke na-akọwa otu esi tinye akara mmiri ma ọ bụ WaterMark na onyonyo niile ị na-eji na blọọgụ gị.
ElfYourself - ibu elf ma gbanwee ndị enyi gị na elves
Ma lee otu elves si agba egwu na osimiri ... ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ndị enyi gị ka ha bụrụ elves funniest ị ga-anwale ElfYourself
Ule Gbalịa m blogger!
Blọọgụ ọzọ nke na-agabiga na-enweghị euro site na peeji nke Vinagre Asesino. Ọ ga-apụta dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ?
Virustotal.com nyochaa faịlụ na 32 dị iche iche antivirus, online, n'efu na Spanish
Virus Total na-enye gị ohere nyochaa faịlụ ọ bụla na 32 dị iche iche antivirus mmemme na ntanetị, na Spanish na kpamkpam n'efu.
Kedu ihe na-eme nnukwu blog dị ukwuu? Ebee ka akụkọ na-enweghị ntụnye sitere? Ànyị na-agbaso ụkpụrụ omume ọma?
Ederede izizi bipụtara na Tribuna Libre nke Victormx dere, site na ElNecio.com. You kwenyere na nkwubi okwu ha ma ọ bụ na ị naghị ekerịta ha?
Gbanwee paswọọdụ hotmail. Esi gbanwee paswọọdụ na Windows Live Hotmail
Gbanwe okwuntughe Hotmail dị mfe, mana ụfọdụ ndị ọrụ na-enwe nsogbu n’oge mgbanwe paswọọdụ. Gụọ ihe ọmụmụ a iji mara otu esi eme mgbanwe site na nkwụsị.
Etu ị ga-esi cheta isi mmalite ndị ị na-eji n'isiokwu gị ma kpachara anya maka PCP
Ọ bụrụ na ijighi n'aka na ị na-ejikọ n'ụzọ ziri ezi na isi mmalite ozi gị, ị kwesịrị ịgụ isiokwu a
Ihe 5 ị kwesiri ima banyere memes
Ihe niile na-egbuke egbuke abụghị meme :) Lee ihe ise ị kwesịrị ịma banyere memes ka ị wee nwee ike ị nweta uru na ngwa ọrụ mmekọrịta a maka ịkwalite n'etiti blọọgụ.
Kedu ihe iji defragmenting draịvụ ike
Defragment Ike mbanye. Ọ bụrụ na ị nụla mgbe niile na ị kwesịrị iwepu draịvụ ike gị mana ị maghị ihe kpatara ị ga - eji mee ya, ị ga - agụ edemede a maka ịkọwa ihe na ị ga - ejide n’aka.
Kedu eserese eserese m tinyego? na ụdị ndịna-emeputa kaadị m nwere ike iwunye?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbanwe kaadị eserese na ị maghị nke ị rụnyere, ma ọ bụ nke ị nwere ike iwunye, ịkwesịrị ịgụ akwụkwọ ntuziaka a.
Akwụkwọ akụkọ nke ọkwa aghụghọ
Ọ bụrụ na ị sonyere na asọmpi Gedket ị kwesịrị iwepu njikọ ndị rụtụrụ aka na blọgụ ahụ, ebe ọ bụ na Gedket, ha ekpebiela ịchị anyị niile ndị na-ekere òkè ịchị ọchị.
Otu esi eji ndi ozi abuo site na otu komputa na otu oge
Jiri Ndi-ozi abuo n’otu oge. Idobe ndị ozi abụọ nwere akaụntụ email dị iche iche meghere n'otu oge dị mfe na akwụkwọ ntuziaka a obere usoro.
Etu esi amata ihe adreesị IP ahụ na email Hotmail
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma adreesị IP nke onye na-eziga gị onye zitere gị email Windows Live Hotmail, na obere nkuzi a ị ga-ahụ otu ọ dị mfe ime ya.
Enweghị ndị dike na blogosphere? Meme: Ndị dike n'ime ịde blọgụ
86400, Emezeta na Greenshines bụ ụfọdụ n’ime ndị nyeere m aka n’amaghị ama kee mmanya na-egbu egbu.
Etu esi etinye onyonyo na ntinye aka nke Windows Live Hotmail ọhụrụ
Ọ bụrụ na ị maghị etu esi ahazi mbinye aka nke ọhụụ ọhụụ ọhụụ (Hotmail) ma ọ bụ otu esi etinye onyonyo na mbinye aka gị, ị kwesịrị ịgụ akwụkwọ ntuziaka a.
Esi emeghe Windows XP Task Manager
Kedu ka m ga-esi mepee Task Manager? Na Windows XP imeghe Task Manager ị ga-pịa a Nchikota atọ igodo n'out oge.
Kedụ ka m ga - esi kee MySpace? Nzọụkwụ site nzọụkwụ nkuzi.
Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi enwe peeji nke gị na MySpace, soro nkuzi a, ị ga - ahụ otu esi eme ya site na nkwụsị.
!!! Kpachara Anya Spam¡¡. Onye maara ihe nọ na-akpọ oku ma kpọọ ụlọ gị
Spam bụ mkpofu nke ha zigara anyị na ozi ịntanetị anyị. Ekwela ka ihe mkpofu ju gị ma mụta izere ya.
Jiri ozi n’ebunyeghị ihe ọ bụla na kọmputa gị iji MSN Web Messenger
Web Messenger MSN na-enye gị ohere iji onye ozi ahụ na-enweghị ịwụnye mmemme ọ bụla. Nzọụkwụ nkuzi site na otu esi eji Mesenger na-etinyeghị ihe ọ bụla na PC gị.
Phishing. Kedu ihe bụ Phishing, otu esi esi zere ya na kedụ ọrụ dịịrị ụlọ akụ na ụlọ akụ na-echekwa ego tupu Azu
Phishing, pishing ma ọ bụ pising, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na edepụtara ya edezi ma ọ bụ na ezighi ezi, otu osila dị e jiri okwu atọ a chọpụta ihe banyere otu nsogbu, izu ohi nke koodu nnweta na ụlọ akụ na ntanetị.
Meme mbụ m. Ihe mere m ji dee blọọgụ m. Kedu ihe bụ meme?
Kedu ihe bụ meme? N’iji memem nke mbu m ga - agwa ihe m chere n’eme, kpachara anya! nke na-abụghị nkọwapụta nke meme, nke ahụ bụ ihe wikipedia bụ maka.
Etu ị ga-esi denye aha na ndepụta RSS na ihe bụ ndepụta RSS
Denye aha na ndepụta RSS na-enye gị ohere ịmara banyere ihe edepụtara na weebụsaịtị. Mụta iji faili ntanetịime usoro ntuziaka a.
LAST.FM. Otu esi emepụta akaụntụ iji chọpụta egwu ọhụrụ site na iji LASTFM
Last.FM bụ ụzọ ọhụrụ iji chọpụta egwu n'ịntanetị. Izute ìgwè ọhụrụ na ndị omenkà site na ịmepụta akaụntụ na-akwụghị ụgwọ na Last.fm site n'enyemaka nke akwụkwọ ntuziaka a-site-nzọụkwụ.
Zere mmelite ozi ma ọ bụ laghachi na mbipute gara aga
Chọrọ izere imelite ozi gị? Want chọrọ ịlaghachi na ụdị mbụ nke Messenger? Iji gaa n'ihu n'iji ụdị MSN gị, gụọ ntuziaka usoro a.
Otu esi etinye mp3s gị na otu olu ahụ ma zere ịba ụba olu n'etiti abụ na egwu
Ndi mp3s gi n’otu n’otu n’otu n’otu? Kedu ka I gha esi tinye egwu gi n’otu olu? Gụọ akwụkwọ ntuziaka a ma ị ga - ahụ otu esi edozi ụda nke mp3s gị dị mfe.
Nlele peeji 50.000. Uzo ozo ndi nleta 2.000 kwa ubochi
Ihe kariri peeji 50.000 boro ekele gi. Ekele siri ike.
MP3Gain. Ntuziaka nwụnye na nsụgharị Spanish nke MP3Gain
MP3Gain na - enye gị ohere ịtụgharị MP3 gị niile n’otu olu ka ị ghara ịnwụchi ntị n’etiti egwu. Guo MP3 Nweta ntuziaka ka ịmata ka ị ga-esi gbochie ibanye elu na olu a.
Onyinye Xbox 360. Soro n'efu na ọwa MSN.es ma merie XBox360 site na ịbịaru eserese izu abụọ nke asọmpi ahụ.
Extensions tes na-eme ka ị mara ụdị nke faịlụ bụ, mana ndọtị ahụ na-ezo na ndabara na Windows. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma otu esi ahụ ndọtị, gaa n’ihu ịgụ akwụkwọ ntuziaka a
N’ebe ọ bụla FM na-enye gị ohere ige egwu kachasị amasị gị n’ebe ọ bụla. Hụ otu o si dị mfe iji mepụta akaụntụ Anywhere.fm gị ma bido bulite egwu site na ntuziaka usoro a.
IZArc compressor-decompressor. Etu esi wunye IZArc ihe compressor otutu di iche iche ma chefuo WinRar
IZArc bụ compressor bụ n'efu dị n'asụsụ Spanish (yana ihe karịrị asụsụ iri anọ) na-enye WinRAR ma ọ bụ WinZip ọzọ na-akwụghị ụgwọ. Iji ntuziaka a, ị ga-ahụ otu esi etinye IZArk ngwa ngwa ma kwụpụ nzọụkwụ.
Kedụ ka m ga - esi si na Windows Live Hotmail gaa na ochie MSN Hotmail?. Enweghị ike ịlaghachi na nsụgharị gara aga?
Enwere m ike ịlaghachi na mbu nke Hotmail? Ọ bụrụ n ’eche ma ị nwere ike ịlaghachi na ụdị ochie ochie MSN Hotmail a ma ama, mara na ị gaghị enwe ike ịlaghachi na Windows live Hotmail.
Kwa ụbọchị, a na-amụ ọkpọ. Abụla otu n’ime ha
Ọ bụrụ na ị gafere ndụ na-enweghị nlezianya ị ga-akwụ ụgwọ nsonaazụ ya. Obentanetị na-erubere otu iwu ahụ, ya mere ị ga-eji akọ na ọrụ gị na netwọkụ. Nọgide na-agụ ....
Etu esi lelee faịlụ ezoro ezo. Chọta faịlụ ndị zoro ezo na kọmputa gị
Etu esi lelee faịlụ ezoro ezo. Hụ faịlụ zoro ezo na kọmputa gị dị oke mfe, na-agbaso obere akwụkwọ ntuziaka a na ị ga-ahụ otu esi ahụ faịlụ zoro ezo na PC gị.
Diski diski jupụtara? Etu esi abawanye ohere na draịvụ ike m.
dị ka, uru, ohere, diski, ike, n'efu, nha, efu, buo ibu, nwekwuo, abawanye, diski, diski diski, diski ike, akwụkwọ ntuziaka, nkuzi, mmanya